Madaxweynaha Puntlad iyo madaxdii hore oo ka qaybgalay aas qaran oo loo saameeyay Marxuum Gen Carays. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha Puntlad iyo madaxdii hore oo ka qaybgalay aas qaran oo loo saameeyay Marxuum Gen Carays.
Madaxweynaha Puntlad iyo madaxdii hore oo ka qaybgalay aas qaran oo loo saameeyay Marxuum Gen Carays.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 24 January 2019 ka qayb galey aas qaran oo loo sameeyey Murxuum Gen Cabullaahi Cai Mire (Carays).
” Waxaan tacsi gaar ah u dirayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday samir iyo iimaan Alle ha idinka siiyo, Wuxuu noo ahaa halgamaa wax badan kasoo qabtay dalka Soomaaliyeed iyo Puntland taariikhdu way xusi doonta anaguna waan xusuusan doonaa haddii Alle idmo, Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland iyo cid kasta oo uu la mucaamulay oo ay wax kala gaareen in ay CAFISO ciddii wax gaar ah u haysatana in ay Dowladda Puntland lasoo xidhiidhaan